Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Korea Atsimo | JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Yorobà
Topy Maso An’i Korea Atsimo
Efa 100 taona mahery izay no nisian’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Korea Atsimo, ary tsy nisy fanakantsakanana mihitsy. Ny tena olana atrehin’ny Vavolombelon’i Jehovah any dia ny fiampangan’ny fanjakana azy ireo, satria tsy manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana izy ireo.
Tsy eken’i Korea Atsimo hoe manana zo tsy hanao miaramila ny olona raha tsy mety amin’ny feon’ny fieritreretany izany. Tsy manome asa sivily azo atao ho solon’ny raharaha miaramila àry ny fanjakana. Tsy maintsy migadra 18 volana àry ny tovolahy Vavolombelon’i Jehovah izay tsy mety manao miaramila. Vavolombelona 40 ka hatramin’ny 50 eo ho eo no migadra isam-bolana. Rehefa avy manefa ny saziny izy ireo, dia mbola mijaly ihany satria misoratra any amin’ny antontan-taratasiny hoe efa nanao heloka bevava izy, ary hoatran’ny hoe nandositra fa tsy nety nanao miaramila. Betsaka àry ny olana atrehin’ny Vavolombelon’i Jehovah, ohatra hoe rehefa mitady asa.
Sahirana koa ny lehilahy nahavita raharaha miaramila, izay nianatra Baiboly ka nahita hoe tokony ho tia ny mpiara-monina aminy izy, ary tsy tokony hianatra ady intsony. Imbetsaka izy ireo no miakatra fitsarana sy ampandoavina lamandy, satria tsy mety manao fiofanana miaramila mihitsy isaky ny antsoina hanao rezervista.
Efa 500 mahery izay ny didim-pitsarana navoakan’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona manameloka an’i Korea Atsimo, noho ny fanitsakitsahana ny zo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana. Nolazainy koa hoe tsy rariny ny fanagadrany olona. Nilaza koa ilay komity fa tsy maintsy manao zavatra i Korea Atsimo mba tsy hiverenan’izany intsony amin’ny hoavy. Raha arahina izany, dia ho voahaja tsara ny zo hanaraka ny feon’ny fieritreretana sy ny fahalalahana ara-pivavahana any Korea Atsimo.